Mkpa ka ihichapụ iCloud ndabere
Part 1. Gịnị ka ọ pụtara ka ihichapụ ndabere na iCloud
Ị ghọtara na ị pụrụ nwere iCloud ndabere na ngwaọrụ gị ka ị ghara mkpa? Nke a karịsịa-eme mgbe ị nweta nkwalite ka a ngwaọrụ ọhụrụ na ebe ọ bụ iCloud azọpụta backups dabeere na ngwaọrụ ID, ị nwere ike ọzọ backups karịa gị mkpa ma ọ bụ ọbụna oyiri n'anya. Nsogbu ọzọ na-enwe ọtụtụ iCloud backups bụ na ha na-eri elu a otutu ohere na ngwaọrụ gị na ike ya mere budata emetụta gị ngwaọrụ arụmọrụ.
Ọ bụ ya mere oké mkpa oge ihichapụ ochie iCloud arụmọrụ onwe elu ụfọdụ oké mkpa ohere nchekwa ma hụ na ngwaọrụ gị rụrụ na ezigbo ike. Dabara nke ọma, ihichapụ ochie iCloud backups dị mfe dị ka anyị ga-ahụ n'okpuru ebe a.
Part 2. Olee ka ihichapụ iCloud ndabere si iPhone / iPad
Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ ka ihichapụ iCloud ndabere gị iPad ma ọ bụ iPhone.
Nzọụkwụ otu: na ngwaọrụ gị igba egbe Ntọala ngwa na mgbe ahụ enweta on iCloud
Nzọụkwụ Abụọ: Enweta na Nchekwa
Nzọụkwụ atọ: Họrọ ndabere ị ga-achọ ka ihichapụ na mgbe ahụ enweta on Nhichapụ
Nzọụkwụ anọ: enweta na "Gbanyụọ & Hichapụ" na mgbe ahụ na-eche maka usoro iji wuchaa.
Part 3. Olee ka ihichapụ iCloud ndabere site na kọmputa
Ọ bụrụ na ị ga-kama hichapụ gị iCloud ndabere na kọmputa gị, na-eso ndị a dị mfe iji mee ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac ọrụ Họrọ Apple menus> System akwụkwọ> iCloud> Jikwaa> Backups. Họrọ backups ị chọrọ ka ihichapụ wee pịa "Hichapụ." Ị ga-mkpa iji gosi na nhichapụ.
On Windows; Gaa Malite NchNhr> niile Mmemme> iCloud nchekwa. Ẹkedori iCloud na mgbe ahụ Pịa na "Jikwaa"
Na mmapụta window pịa "Backups" wee họrọ backups ị ga-achọ ka ihichapụ. Pịa na Nhichapụ na akwado Deletion.
Part 4. Olee agbanyụ iCloud ndabere
I nwekwara ike ikpebi na ị chọrọ gbanyụọ iCloud ndabere ozugbo na ihe niile. Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ gbanyụọ iCloud ndabere.
Na gị iPad ma ọ bụ iPhone: Gaa na Ntọala mgbe ahụ iCloud, mgbe ahụ enweta agbanyụ
Na gị Mac: Gaa na Apple NchNhr> System Mmasị na wee pịa na iCloud. Ka ịgbanyụọ iCloud dị nnọọ deselect ya si ebe a.
On Windows: ẹkedori iCloud ngwa na Windows mgbe ahụ deselect iCloud mbanye. Jide n'aka na ị ịzọpụta mgbanwe.
Part 5. nwere ike ghara ihichapụ iCloud na nkwado ndabere na ojiji?
Ọ bụrụ na ị gbalịrị ka ihichapụ gị iCloud ndabere nanị na-enweta ndị "nwere ike ghara ihichapụ n'ihi ndabere bụ na iji" ozi, ị bụghị naanị otu onye. Nke a bụ otu nsogbu nke a otutu iOS ọrụ e na-ata ahụhụ maka mgbe now enweghị a doro anya ngwọta. Gịnị na-eme bụ na ị na-agbalị ka ihichapụ a ndabere na e ndondo kere site na ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ na a na-weghachiri eweghachi site ọzọ iOS ngwaọrụ. Nke a bụ isi ihe mere ọ gaghị ekwe omume ka ihichapụ ndabere.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, ọ dịghị ihe doro anya na ngwọta nke ga-enyere gị aka idozi nsogbu a. Ọ bụrụ na ị na-agbalị ihichapụ ihe iCloud ndabere ma na-a ozi, na-eche 48 aka elekere na-agbalị ọzọ. Ichere yiri ka na-arụ ọrụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-akasị n'ihi na nkwado ndabere na mpaghara na ị na-ihichapụ gaghị na-eweghachiri si ọzọ iOS ngwaọrụ.
Part 6. Otu Pịa onwe elu karịa nchekwa na gị iPhone / iPad
Na ihichapụ gị iCloud backups ị nwere ike ikpochapụ si ụfọdụ ohere nchekwa na ngwaọrụ gị na mma ya ịrụ ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụghị naanị gị ochie iCloud backups nwere ike belata ngwaọrụ gị arụmọrụ. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ junk faịlụ na ngwaọrụ gị na ị chọrọ ikpochapụ ma ọ bụrụ na ị na-aga iji nweta ihe nchekwa.
Wondershare Nchekwa nchicha bụ ngwá ọrụ na-enyere gị aka ọcha si ndị a junk faịlụ na dị nnọọ 1-click. Ọ bụ a ukwuu ọtọ, ukwuu irè ngwa na ị ga-ahụ bara uru n'ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ otu gụnyere;
Nke a ngwa-enye gị ohere iji chebe gị onwe ozi site erasing niile mwute ozi tupu ị na-ere ma ọ bụ egweri ngwaọrụ
Ị nwere ike iji ya na-adịgide adịgide-ewepụ ihe niile na-ehichapụ faịlụ ma hụ na ha na-unrecoverable
I nwekwara ike iji ya na-adịgide adịgide ihichapu ngwaọrụ gị
I nwekwara ike adị n'elu ngwaọrụ gị site erasing niile junk faịlụ
Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ onwe elu nchekwa na 1-pịa iji Wondershare Nchekwa nchicha
Nzọụkwụ otu: Mgbe agba ọsọ Nchekwa nchicha na kọmputa gị, ẹkedori ya na mgbe ahụ Jikọọ na ngwaọrụ gị na iji eriri cables.
Nzọụkwụ abụọ: Họrọ "Otu Click nzacha na mkpocha" na nke a isi window.
Ngwa ga-ozugbo amalite ka iṅomi ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ atọ: The ngwa ga-depụta niile nke dị junk faịlụ. Dị nnọọ pịa "nzacha na mkpocha" onwe elu ngwaọrụ gị.
Na-na ngwaọrụ gị ejikọrọ n'oge dum usoro iji hụ arụmọrụ. Ozugbo a na-okokụre, ngwa ga-egosipụta ọnọdụ nke ngwaọrụ gị nchekwa dị ka e gosiri ndị na-esonụ window.
Olee otú iji weghachi iPhone, iPad, na iPod si iCloud ndabere
Olee otú Hichapụ Photos si iCloud
Full Guide ịgbanwe gị iCloud Akaụntụ gụnyere ID / Email / Paswọdu / Aha ojii
iPad iCloud ndabere Aghụghọ Ị ga-achọghị Miss
Otú ịgbanwe iCloud e-mail Address.
4 Ụzọ Iji nyere gị aka Bibie nke Ugboro ugboro iCloud ịrịba ama-na rịọ
> Resource> iCloud> Mkpa ka ihichapụ iCloud ndabere